သတင်း - Arenti သည်မော်ရိုကိုတွင်ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် Eleczar ကိုခန့်အပ်သည်
Video Doorbells များ
Arenti သည်မော်ရိုကိုတွင်ဒေသတွင်းဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် Eleczar ကိုခန့်အပ်သည်
Hangzhou - ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ - ထိပ်တန်း IoT စမတ်အိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာပံ့ပိုးပေးသူ Arenti သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်စီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် Eleczar နှင့်မော်ရိုကိုတွင်ရှိနေခြင်းကိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းမှုအသစ်သည် Arenti ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို Morocco နှင့်မြောက်အာဖရိကရှိ၎င်း၏စားသုံးသူလက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့ချဲ့ထွင်သည်။
Eleczar သည် smart home ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော smart lighting, alarm ကဲ့သို့စမတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို ဦး ဆောင်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည်။ Eleczar ၏ပိုင်ရှင် Adnane Zeroual က“ Facebook ပေါ်မှာ Arenti ကင်မရာတွေရဲ့အံဝင်ခွင်ကျဒီဇိုင်းကိုငါတို့တွေ့တဲ့အခါငါတို့ကအလားအလာရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် Arenti ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးငါတို့ကထုတ်ကုန်တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့က Arenti ကိုဖြန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီဇင်ဘာ၌ကင်မရာများနှင့်မကြာမီငါတို့ရောက်လာသောပထမဆုံးအော်ဒါကိုတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် မှစတင်၍ Arenti လုံး ၀ ကင်မရာများကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးသူနှင့်တင်သွင်းသူဟုတရားဝင်အမည်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းခြင်းအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပြီး Arenti နှင့်အတူပေးနိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုအပြည့်အ ၀ ယုံကြည်မှုရှိသည်။
Eleczar နှင့်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းခြင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။
Arenti သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများအားခေတ်မီသောဒီဇိုင်း၊ စျေးနှုန်းသက်သာသော၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Arenti Technology သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများအားပိုမိုလုံခြုံ။ ပိုမိုလွယ်ကူ။ စမတ်ကျသောအိမ်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များပို့ဆောင်ခြင်းကို ဦး တည်သော AIoT အုပ်စုဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားပြီး Arenti ကိုကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ၊ ကံဇာတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ ၅၀၀ နှင့်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်စမတ်အိမ်ပလက်ဖောင်းများအပါအ ၀ င်နယ်ပယ်အသီးသီးမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Arenti core အဖွဲ့သည် AIoT၊ လုံခြုံရေးနှင့်စမတ်အိမ်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံ ၃၀ ကျော်ရှိသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ။ www.arenti.com ဖြစ်သည်.
Eleczar သည်သင်၏ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အိမ်ဖော်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာအပြည့်အစုံကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းရန်ကျေနပ်သည်။
စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ELECZAR သည်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများတင်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများဖြစ်သော circuit breakers, transformers, လျှပ်စစ် panel များနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကန်ထရိုက်တာများ၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းအတွက်အထူးပြုထားသည်။ မည်သည့်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအဖြေသည်သင်နှင့်မသင့်တော်ပါ၊ လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုကဏ္inများတွင်သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုသင်အားကိုးနိုင်သည်။
Meknes ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်မှတိုက်ရိုက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Siemens, Philips, Fermax, Fresco, General Electric ကဲ့သို့အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်များမှထုတ်ကုန်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော်ကိုကျယ်ပြန့်စွာ ၀ ယ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ။ https://eleczarstore.com.
Post တင်ချိန်: 22/03/21
EU Add: Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, နယ်သာလန်
Arenti သည် Visiotech ကို၎င်း၏ဒေသအဖြစ်ကြေငြာသည်။
Arenti သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် iF DESIGN AWARD ကိုရရှိခဲ့သည်
Arenti သည် Topica LLC ကို Local Distr အဖြစ်ခန့်အပ်သည်။
Arenti သည်ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် Eleczar ကိုခန့်အပ်သည်။
Arenti သည် ITM စီမံခန့်ခွဲမှုကို Local D အဖြစ်ခန့်အပ်သည်။
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ။ 浙 ICP 备 ၂၀၀၁၄၁၈၄ 号 -၁